War kasoo baxay wasaaradda Keydka Mareykanka ayaa lagu sheegay in Junduql Aqsaa lagu tiimbareeyay liiska waxa Argagaxisa loogu yeero sababa la xiriira isago u dagaallamaya in sharciga islaamka laysku maamula islamarkaana aan aqoonsaneyn ‘Sharciyadda caalamiga ah’ ee Q.Midoobe dajisay.
Dhinaca kale bayaan kasoo baxay Jabhadda Fatxu Shaam ayay ku sheegtay in Junduql Aqsaa ay si rasmi ah ugu biirtay Sufuufta JF Shaam.
Bayaan kasoo baxay Jabhadda oo uu ku saxiixnaa Sheekh Max’med Al Jowlaani ayaa lagu sheegay in hoggaanka Jabhadda uu aqbalay Beyco uga timid mas’uuliyiinta iyo ciidanka Junduql aqsaa.
Xussaam Al Shaafici Afhayeenka Jabhadda Fatxu shaam ayaa sheegay in ay aqbaleen Beycada Jundul aqsaa si ay u joojiyaan dhiigga ka dhax daadalanaya xoogaga Islaamiga ah oo maalmihii lasoo dhaafay ku dagaallamayay gobollada Idlib iyo Xammaah.
JF Shaam waxay sheegtay in shuruudaha Beycada ay kamid ahaayeen in Jundul aqsaa ay ku shaqeyso dhammaan siyaasadaha Jabhadda islamarkaana ay soo wareejiso dadka ku eedaysan in ay dileen saraakiil katirsan kooxda Axraaru Shaam islamarkaana wixii khilaafka dhaliyay lagu xalliyo maxkamad sharci ah.
Labada Jamaaco ayaa la sheegaa in ay yihiin garabyada Al Qaacidda ee wadanka Suuriya waxayna awood buuxda ku leeyihiin Suuriya gaar ahaan Waqooyiga iyo Bartamaha wadankaasi.
Midnimada ay gaareen Fatxu Shaam Ex.Al Nusrah iyo Junduqul aqsaa ayaa sii xoojinaysa awoodda jamaacaadka Jihaadiga ah ee ka halgamaya Mandiqadda Shaam.
Gaari Gaashaaman Oo Ciidanka Kenya looga Gubay Duleedka Degmada Ceelwaaq Ee Gobolka Gedo.